Izindaba - I-Longitudinal Welded Pipe Unit yeNqubo Yokukhiqiza iyini?
I-Longitudinal Welded Pipe Unit yeNqubo Yokukhiqiza iyini?
Inqubo yokukhiqiza umshini we-longitudinal ilula, ukusebenza kahle kokukhiqiza, izindleko eziphansi kanye nentuthuko esheshayo. Amandla omoya ipayipi eliphothene ngokuvamile liphakeme kunepipi eliqondile elithungelwe ngomthungo, ipayipi lingasetshenziswa ukukhiqiza ipayipi elikhudlwana lobubanzi obungenalutho, kodwa futhi nobubanzi obufanayo bokukhiqizwa kwepayipi lepayipi lamadayimitha ahlukene. Kodwa-ke, uma kuqhathaniswa nobude obufanayo bepayipi eliqondile, ubude be-weld bukhuphuke ngo-30 ~ 100%, futhi izinga lokukhiqiza liphansi.
Ngakho-ke, ububanzi obuncane bokusebenzisa okuningi kwephayiphu eqondile ye-seam welding, ipayipi elikhulu eliphakathi nendawo lisetshenziswa kakhulu nge-welded spiral.
1.Ukulethwa komfutho ophansi okokuhambisa oketshezi insimbi yensimbi (GB / T3092-1993) owaziwa nangokuthi ipayipi elijwayelekile elishiselwe, elaziwa kakhulu ngokuthi ithubhu emnyama. Isetshenziselwa ukuhambisa amanzi, igesi, umoya, uwoyela kanye nokushisa umusi nokunye okujwayelekile okumanzi okuphansi kwengcindezi nokunye ukusetshenziswa kwepayipi lensimbi elishiselwe. Ukujiya kodonga lwamapayipi kuhlukaniswe ngensimbi ejwayelekile nensimbi yensimbi ejiyile; ukuthatha ifomu kuhlukaniswe ngepayipi elingafakwanga imicu (ipayipi elikhanyayo) nange-rebar. Ukucaciswa kwepayipi lensimbi elinobubanzi bokuzisholo (mm) lithe ubukhulu bokuphakama ububanzi obusondele. Imvamisa isetshenziswa ngokwesiko, ithe ingcindezi ephansi yokuhambisa uketshezi ipayipi yensimbi esetshenzisiwe ngaphezu kokulethwa okuqondile koketshezi, kodwa futhi nenani elikhulu lepayipi lokuhambisa uketshezi olunengcindezi esetshenziselwa ipayipi elishiselwe ngensimbi.
2.Ukulethwa okuncane kwengcindezi ukulethwa okushisayo okushiselwe ipayipi yensimbi (GB / T3091-1993), eyaziwa nangokuthi ipayipi lensimbi elihlanganisiwe, elaziwa njengepayipi elimhlophe. Isetshenziselwa ukuhambisa amanzi, igesi, uwoyela womoya nokushisa umusi, amanzi afudumele nokunye uketshezi oluphansi olujwayelekile noma okunye ukusetshenziswa kwepayipi lokushisela elishisayo (i-welding noma i-welding). Ukujiya kodonga lwamapayipi kuhlukaniswe ngamapayipi ajwayelekile wensimbi nopayipi wensimbi oshubile; ukuthatha ifomu kuhlukaniswe ngepayipi lensimbi elingasontekile futhi kufakwe ipayipi lensimbi elihlanganisiwe. Ukucaciswa kwepayipi lensimbi elinobubanzi bokuzisholo (mm) lithe ubukhulu bokuphakama ububanzi obusondele. Ngokuvamile kusetshenziswa ngamasentimitha, njenge-11/2 njalonjalo.
3. Ikhebula elijwayelekile le-carbon steel wire (GB3640-88) izakhiwo zezimboni nezomphakathi, ukufakwa kwemishini nemishini kanye namanye amaphrojekthi wokufaka kagesi wokuvikela ipayipi lensimbi yocingo.
4. I-seam eqondile ishiselwe ipayipi yensimbi (YB242-63) iyipayipi le-weld longitudinal nensimbi yensimbi. Imvamisa ihlukaniswe ngamapayipi wensimbi ashiselwe ngemethrikhi, amashubhu anezindonga ezincanyana, ama-transformers, ukupholisa ishubhu njalonjalo.
5.Ingcindezi yokulethwa kokuhambisa okuvunguza ipayipi elicwilisiwe le-arc (SY5036-83) iyisiqeshana sensimbi esigoqiwe esishisayo sebhubhu elingenalutho, ekamelweni lokushisa lokushisa, elinendlela yokufaka i-arc emaceleni amabili yokulethwa koketshezi ngaphansi kwengcindezi ipayipi lensimbi. Ukuqina kwensimbi yensimbi, ukusebenza kwe-welding, ngemuva kokuhlolwa nokuhlolwa okunzima okuhlukahlukene kwesayensi, ukusetshenziswa kokuphepha nokuthembekile. Ububanzi obukhulu bensimbi yensimbi, ehambisa ukusebenza kahle okuphezulu, futhi kungonga ukubekwa kokutshalwa kwephayiphi. Isetshenziselwa ukuhambisa amapayipi kawoyela negesi yemvelo.
6.Ingcindezi yokulethwa komoya ovulekile iphothene imvamisa yensimbi ipipe yensimbi (SY5038-83) iyisiqeshana sensimbi esigoqiwe esishisayo sebhubhu elingenalutho, ekamelweni lokushisa Kuvunguza ukubunjwa, indlela yokushisela imvamisa ephezulu yokulethwa kwengcindezi yoketshezi Kuvunguza okushiselwe imvamisa ephezulu ashiselwe steel ipayipi. Strong ingcindezi steel, plastic, futhi Welding lula futhi machining udini; ngemuva kokuhlolwa nokuhlolwa okuhlukahlukene okunzima nokwesayensi, ukusetshenziswa okuphephile, okuthembekile, ububanzi bepayipi lensimbi, ukusebenza kahle kokudlulisa, futhi kungonga ukubekwa kwemali yamapayipi. Ikakhulu esetshenziselwa ukubeka ukuhanjiswa kwamapayipi kawoyela, igesi yemvelo njalonjalo.